Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2195 - 2196 | XperimentalHamid
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2195 - 2196
funda Isahluko 2195 - 2196 yenoveli Unyana osisigidi eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
Akukuva oku uCharlie, wothuka kancinci waza wabuza: “Kutheni ungamyekelanga emva kweentsuku ezisithoba? Ubungatshongo na ukuba iza kuba ziintsuku ezisixhenxe kuphela?
U-Orvel wathi ngeentloni, “Mnu. Wade, ndicinga ukuba kufuneka undixelele ukuba abantu mabahambe. Andikwazi ukwenza izigqibo… ”
U-Issac wadanduluka: “Orvel, kutheni ungamyeki ahambe? Lo mntu uburhabaxa kakhulu. Ukuba awumyeki ahambe ngexesha elimisiweyo, ulumke ajike aziphindezele kuwe! ”
U-Orvel wancuma, wakrwempa intloko yakhe wathi: “Um… bendingacingi ukuba, uMnu. Wade ebegcina u-Miss Song eJapan, ze wabuya ngesikhephe indlela yonke ebuyayo, inokuba ibixakekile, Nditsalele umnumzana Wade ukubuza malunga noku. Bendifuna ukukuxelela xa ubuya. ”
UCharlie wanqwala wathi, “Kulungile, myeke ahambe.”
Ngokukhawuleza u-Orvel wathi, “Kulungile Mnumzana Wade, ndiza kwenza amalungiselelo.”
U-Issac wathi kuCharlie ngeli xesha: “Mfundisi, ndicinga ukuba kungcono uye apho uxelele ixhegokazi ukuba sisigqibo sakho sokulibazisa ukukhululwa kwalo kangangeentsuku ezimbini. Ngaphandle koko, nje ukuba abuyele e-Eastcliff, uya kucinga ngokuziphindezela. ”
U-Orvel wathi ngaphandle kwamathandabuzo: “Ndiziphindezelele? Myeke ahambe! NdinguOrvel, osweleke kanye, ngoko andimoyiki! ”
U-Issac wawangawangisa isandla sakhe kwaye wathi ngokunyanisekileyo: “Awuqondi indlela kaMissy yokuziphatha. Ungumntu onenzondo ekhethekileyo kwaye uneendlela ezahlukeneyo zokuziphindezela. Ukuba inkosi encinci iyamcaphukisa, ngokuqinisekileyo ayinakwenza nto kwinkosi encinci. Ukuba uyamcaphukisa, akazukuphazamisa kuphela, kodwa nosapho kunye nabahlobo bakho. ”
Ukuva oku, u-Orvel ngequbuliso waba novalo kancinci.
Kodwa wayengafuni ukuba uCharlie amjongele phantsi, ngoko waluma intloko yakhe wathi: “Kulungile, andoyiki. Ndiyi-Orvel! ”
U-Issac khange akuncede ukuncwina.
Wayemazi kakuhle umlinganiswa kaCynthia.
UCharlie ekuqaleni wayevumele uCynthia ukuba ahlale apha iintsuku zasixhenxe, kodwa u-Orvel wamvumela ukuba ahlale iintsuku ezilithoba, kwaye ngokuqinisekileyo wayeza kuba lunge kakhulu ngalo mzuzu.
UCharlie unamandla kwaye indoda endala iyinxalenye. Ngokuqinisekileyo akangekhe enze nantoni na kuCharlie, kodwa soze amyeke uOrvel ahambe.
Ngaphandle koko, umsindo awukhuphulayo eAurous Hill ngekhe ubenayo indawo yokusasaza.
Ke ngoko, ngenxa yenkxalabo yeOrvel, wacebisa uCharlie ukuba amncede aphathe imbiza.
Emva kokuba uCharlie wayesele ekhubekise uCynthia ekufeni. Uninazala kaCharlie, uElaine, wabetha uCynthia. Ngenxa yentiyo enkulu apha, kungabonakala kuyinto encinci ukubamba uCynthia kangangeentsuku ezimbini.
UCharlie wahleka ngalo mzuzu wathi: "Nokuba kunjalo, kufuneka ndiye kubona umakazi wam!"
Xa u-Orvel evile ngale nto, wayesazi ukuba uCharlie uza kunyuka ayokumenzela ipleyiti, wabulela kwangoko.
Ngokukhawuleza waqubuda wathi ngentlonipho: “Uxolo Mnu. Wade, iOrvel ikubangela ingxaki.”
UCharlie wawangawangisa isandla sakhe: “Hayi, sukuyithetha loo nto! Ngapha koko, nonke niyandenzela, ningatsho njani ukuba indizisela ingxaki. ”
Emva kwayo yonke loo nto, uCharlie wathi ku-Issac: “Mnu. UIsaka, lungisa imoto, sihambe kunye! ”
UCynthia wayethuka umama wakhe kwindlu eqeshisayo ngeli xesha.
“UCharlie! Wena [imeyile ikhuselwe] ngubani ongathethiyo! Iintsuku ezisixhenxe zidlulile, kwakutheni ukuze ungandikhuphi? ”
“Unesibindi, khange undivumele ndiphume. Mandiphume kube kanye, ndiza kuyilungisa nani nonke, nganye nganye! ”.
Ngaba ngokwenene ucinga ukuba ndinengqondo engabhadlanga? NdinguCynthia. Ndiyeke ndihambe, ngoku !!! ”
UCynthia wacaphuka njengoko wayekhuza, kwaye ekhohlela ngokuqhubekekayo: “Khohlela ukhohlela ukhohlo… ukhohlela ukhohlo ukhohlo… ukuba awundivumeli ukuba ndiphume, ndiza kujika ndiniphose nonke kuMlambo iYangtze ndikondle kule ntlanzi. Yiza! Ndifuna ukunibulala nonke nganye nganye ukuze ningaze niphile ngaphaya kwale mini, kungasekho bomi kuni [imeyile ikhuselwe]! "
Akumangalisi ukuba uCynthia wayehlanya. Iintsuku ezilithoba, ehlala kwindawo enjalo apho kuhlala abona bantu basezantsi, waye wawa ngokupheleleyo.
Ukongeza, iAurous Hill ikumazantsi eMlambo iYangtze, kwaye ubusika bufumile. Indlu ahlala kuyo ayinamoya womoya okanye ukufudumeza. Yonke imihla, unokuzisula kuphela iinyembezi ebhedini esongelwe ngengubo efumileyo.
Ukusuka kwimzuzwana wokuqala wokungena, wasinda ngokungxama emva kokulindela ukuphela kweentsuku ezisixhenxe.
Ngokungalindelekanga, esangweni, u-Orvel wayengathandi ukumkhulula.
KuCynthia, oku yayingengomsindo kuphela kodwa yayiluloyiko olukhulu kunye nomsindo.
Wayesoyika ukuba uCharlie angazisola konke ngaxeshanye, ixesha leentsuku ezisixhenxe liyakuchithwa, kwaye ke akazukuzinika umhla ocacileyo, ke uqhubeke nokuzivalela endlwini.
Ke ngoko, wakhwaza ngathi uphambene yonke imihla, nje ukutsala umdla wabamelwane abamngqongileyo, ukutsala umdla wokuhlangulwa ngamapolisa, ukubeka uxinzelelo kuCharlie nakwindoda yakhe. Wayefuna ukuphuma ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, wayengazi ukuba i-Orvel ihambise bonke abamelwane izolo.
Esi sakhiwo sizakheleyo, kubandakanya nomnini-ndlu, sinabahlali abangama-30 bebonke. Ngoku, ngaphandle kukaCynthia, wonke umntu uyayonwabela ihotele yeenkwenkwezi ezintlanu yasimahla.
Ke ngoko, ukukhwaza kukaCynthia kunye nokukhwaza kwisithuba. Akukho mntu uyihoyileyo.
Kuze kube lilizwi lakhe liphantse latswina, akukho namnye owamnikayo, nditsho nabamelwane okanye amapolisa awayeze kubuza imibuzo.
UCynthia, owayedandatheke kakhulu, wakhupha iselfowuni kwangoko wathumela ividiyo kuyise, uZhongquan, owayekude e-Eastcliff.
Yathi yakudlula ividiyo, uCynthia wakhala wathi, “Tata! Ndicela uyiyeke lonto [imeyile ikhuselwe] UCharlie mandihambe… andisakwazi ukuyimela… Ukuba akundivumeli ukuba ndiphume, ndiza kufela apha… uuuuu… ”
Ukubukela ividiyo, uZhongquan wancwina engenakunceda.
Uyamazi umlinganiswa kaCynthia, esazi ukuba uCynthia akakwazi kulawula. Usenokude azibulale okanye azenzakalise, wathi nzulu: “UCynthia! Zolile! Ayikokugqibela iintsuku ezimbini? Yiba nomonde, Charlie, ndiqinisekile, ayizukugcina uzivalele, mhlawumbi uyakukuvumela ubuye kwezi ntsuku zimbini. ”
UCynthia wakhala wathi, “Tata! Awazi ukuba ndidlule njani kwezi ntsuku zisithoba! Ukukhula kwam kwaye ndihlupheka ngolwaphulo-mthetho olunje, Tata! Ukuba awuyi kuloo nto [imeyile ikhuselwe] UCharlie, akazukundivumela ndihambe ngoku, ngomso kungenzeka ndingakhululwa, kuzakuthini xa endivalela apha? ”
Njengokuba wayetshilo, waphinda wacenga esithi: “Tata ndiyakucela, mfowunele nje umcele andivumele ndihambe!”
UZhongquan uthethe nzulu: “UCynthia, ndide ndacela uPhilip ukuba acenge uCharlie kwaye ndimthembise ukubuya ndizokuthatha inxaxheba kumsitho wokunqula izinyanya kuMnyhadala ozayo. Lo mbandela ubaluleke kakhulu kusapho lakwaWade. Akufuneki kubekho umohluko kwinto ayithethayo. Ukuba kungenxa yakho, ngenxa yokuba uCharlie angatshintsha ingqondo kwakhona, yilahleko enkulu kusapho lakwaWade! ”
UCynthia waqonda ngoku.
Kwavela ukuba eli xhego lalizimisele ukubeka uxinzelelo kuCharlie, ikakhulu kuba wayengafuni ukumcaphukisa uCharlie!
Xa wayecinga ukuba utata wakhe akathembekanga, uCynthia waba lusizi kakhulu, wakhala wathi: “Tata! Xa uCharlie endivalela ngaphakathi, ndingenza ntoni? ”
Indoda endala ngokungxama yathi: “Owu, Cynthia, ukuba uCharlie akakuvumeli uye kwiFestivali elandelayo, utata uzakucela ingcaciso.”
UCynthia ngequbuliso wawa phantsi: “Tata! Umnyhadala uzakuba ngo-Epreli, kwaye uza kuphantse ube ziinyanga ezimbini! ”
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2197 - 2198